Iindaba - Iibhakethi zethu zokumba-Ukuqinisekisa umgangatho kunye nokuqina
Iibhakethi zethu zokumba-ukuQinisekisa umgangatho kunye nokuqina
XUZHOU MINYAN Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle CO., LTD. imi kweyona sixeko idumileyo oomatshini bokwakha Xuzhou, China. Njengomatshini wobugcisa wokwakha kunye nokuthumela ngaphandle, uMinyan unamava eminyaka yokuthengisa oomatshini bokwakha e-China, sinamava amaninzi kunye nezixhobo zentengiso yangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa kunye nenkonzo yokuthengisa, kwaye samkelwe njengeLungelo lokuThumela ngaphandle ngurhulumente wase China, ifilosofi yethu yeshishini "kukuthembeka, ukuthembeka, ukugqibelela" -ikota ye-CIP.
Ubungakanani beshishini: Iimveliso zethu zithunyelwe kumazwe ahlukeneyo angama-80; zibandakanya iAustralia, iMelika, iNgilani, iPoland, iRussia, i-India, amazwe aphambili e-Afrika, Mid-Asia, mpuma Asia Asia njl.
1. Umzi-mveliso wethu ikakhulu uvelisa i-EXCAVATOR ROCK BUCKET, i-EXCAVATOR EARTHMOVING BUCKET, i-EXCAVATOR SIEVE BUCKET, i-BUCKET TEETH, i-EXCAVATOR RIPPER, i-EXCAVATOR COUPLER EKHAWULELEYO, iimveliso zethu zilungele zonke iintlobo zeemodeli zokumba. Njenge-CAT, XCMG, KOMATSU, BOBCAT, SHANTUI, HYUNDAI…
2. Inkampani yethu ikhuphela oomatshini beenkomo ngaphandle
(1) hydraulic auto crane ngokupheleleyo, ubunzima bokuphakamisa ubuninzi ukusuka kwiitoni ezi-8 ukuya kwiitoni ezili-160.
(2) ngesanti kubunzulu baphantsi Ngokupheleleyo yonke sendawo crane auto, ubunzima nokuphakamisa max ukusuka 25 ton ukuya 1200 ton.
(3) i-crane crane, ubukhulu bokuphakamisa ubunzima ukusuka kwiitoni ezingama-35 zetoni ezingama-2000
(4) I-crane yeNqaba (i-jib ethe tyaba; i-jib ehambayo), ukuphakamisa okuphezulu ukusuka kwi-4 ukuya kwi-50ton. Yonke imodeli inokukuqonda ukuma, phantsi kwenqwelomoya, ukuhamba kunye nokuncamathisela iimfuno zakho zokwakha.
3. I-roller yendlela, ubunzima ukusuka kwi-0.8 ton ukuya kwi-30ton. Ukubandakanya igubu eliphindwe kabini, i-roller yendlela ehambisanayo, igubu elinye kunye ne-roller yendlela eshukumayo, indlela yomoya yomoya.
4. I-asphalt kunye nepavile yekhonkrithi, ububanzi bokusebenza ukusuka kwi-2.0m ukuya kwi-14m.
5. Isilayisha ivili, umthamo webhakethi ukusuka kwitoni enye ukuya kwitoni ezili-12. Umthamo webhakethi ukusuka kwi-0.5 cbm ukuya kwi-6.5cbm
6. I-bulldozer ukusuka kwi-80hp ukuya kwi-520hp
7.I-Excavator ye-Crawler kunye ne-wheel excavator ye-bucket yevolumu ukusuka kwi-0.044cbm ukuya kwi-6cbm.
8. I-Motor Grader ukusuka kwi-102hp ukuya kuma-535 hp.
9. Izixhobo eziphathekayo ezifana nomxhubi wetrakhi ukusuka kwi-6cbm ukuya kwi-14cbm, impompo yesamente ukusuka kwi-37m boom ukuya kuma-56